Welcome to Aayaha Nolosha » AROOS KA DHACAY GOOBTA UU KU AASAN YAHAY CILMI BOODHARI
AROOS KA DHACAY GOOBTA UU KU AASAN YAHAY CILMI BOODHARI
Inta badan aroosyada ka dhaca gudaha dalka Soomaaliya waxaa lagu dhigaa Hoteelada waaweyn, waxaana ku baxa qarashaad aad u fara badan, balse aroos taariikhda galay oo si aad ah loohadal hayo ayaa dhawaan waxa uu ka dhacay degaanka Batalaale oo ah goobta uu ku aasan yahay halyeygii Jacaylka ku caan baxay ee Cilmi Boodhari.
Marka laga hadlayo taariikhda xusuusaha jaceylka soomaalida waxaa la soo hadal qaadaa Cilmi boodhari oo lagu xasuusto inuu ahaa aabihii Soomaaliyeed ee dareenkiisa jaceylka si aan gabasho lahayn u muujiyay.
Goobta uu ku aasan yahay Cilmi Boodhari ee Batalaale oo ah goob loo dalixiis tago xilliyada dareenka jaceylku jiro ayay Lamaane Soomaaliyeed door bideen inay xafladda arooska ku dhigtaan.
Caydaruus Cabdillaahi Beershiya iyo Suleekha Cabdi Cabdille waa lamaanaha doortay in arooskoodu uu ka dhaco xeebta Batalaale ee uu Cilmi ku aasan yahay.
“Ilaa yaraantaydii waxaan ku hamiyi jiray in aan horseedo guulo dadka waxtar u leh, arintan waxay ii ahayd riyooyinkii aan nolosha ka lahaa, sidii aan ugu dhigan lahaa arooskayga meel taariikhi ah oo ka duwan goobaha ay Soomaalidu aroosyada ku dhigtaan” ayuu yiri Caydaruus oo ku faraxsanaa inuu arooskiisa ka dhaco goobta taariikhiga ah ee Batalaale oo uu Cilmi Boodhari qabrigiisu ku yaalo.
Asaxaabtii ka qeyb gashay arooskan waxay badankood ka ambabexeen magaalada Hargeydsa, waxayna safar ku tageen magaalo xeebeeda Berbera goobta ka tilmaaman ee Batalaale.
7-Gaari oo uu ku jiro Bas weyn ayaa lagu daabulay dadkii ka baxay Hargeysa ee xafladdaa u baqoolay, waxaana hoggaaminayay Caydaruus iyo Suleeqa, waxaana lagu soo dhaweeyey 12-kii habeenimo magaalada Berbera, subaxnimadiina waxay socod booqasho gaaban ah ku tageen Badda oo ay sawirro qurux badan ku galeen, waxaana muuqaalada sawirada sii bilayay dharka qurxuun ee ay siteen dadkii arooskaa ka qeyb galay, xafladdunasi qurux badan ayay u dhacday” ayuu yiri wiilka aroosayay oo ku faraxsanaa in arooskiisu uu ka dhaco halka uu Cilmi Boodhari ku aasan yahay.
“Balankii aan wada galnay aniga iyo ninkayga ayaa ahayd in tallaabo kasta oo aan qaadayno ay noqoto mid ku cusub bulshada oo iyaga lagu soo xusuusto, aad ayaana ugu farxay, asxaabtii aan arrinkaas u sheegayna waxay u arkeen arrin cusub oo wanaagsan wayna igu garabsiiyeen ilaa aan soo dhamaystay xafladii arooskayga” ayay iyana tiri caruusad Suleekha oo farxad aan la soo koobi karion uu ka muuqday.
Arooskan ayaa si fiican u soo jiitay indhaha dad badan oo Soomaali ah, waxayna ku timaameen mid ku dayasho mudan, iyagoo saluugay qiimaha sii kordhaya ee lacagaha ku baxa xafladaha aroosyada oo inta badan lagu dhigto hoteelo qaali ah.